Fotoan-tsarotra, filazana fisian’ny fifampiraharahana niteraka krizy politika tao Però · Global Voices teny Malagasy
Fotoan-tsarotra, filazana fisian'ny fifampiraharahana niteraka krizy politika tao Però
Voadika ny 15 Jona 2018 4:26 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Português, Español
(Lahatsoratra teny anglisy nivoaka tamin'ny 28 desambra 2017)
Filoha Peroviana Pedro Pablo Kuczynski. Sarin'ny mpisera Flickr OECD Development Centre (CC BY-NC-ND 2.0)
Namarana ny 2017 niaraka tamin'ny iray amin'ireo krizy ara-politika faran'izay sarotra indrindra tamin'ny tantarany vao haingana i Pero.Herinandro fifampiraharahana, fitarainana momba ny kolikoly,fanesorana filoham-pirenena, fifanakalozan-kevitra ary vazivazy niely haingana izay niteraka rivotra politika ratsy teo amin'ny firenena.
Nahatratra ny faratampony tamin'ny tapaky ny volana desambra io fifanenjanana io raha nisy antoko-na solombavambahoaka mpanohitra nanao fangatahana hanonganana ny filoha Pedro Pablo Kuczynski (fantatra ihany koa amin'ny hoe PPK) noho ny nahavoarohirohy azy amin'ny raharahan-kolikoly, ny raharaha Odebrecht.
Orinasam-panorenana Breziliana voarohirohy amin'ny fanaovana kolikoly maro manerana ny faritra ny Odebrecht. Nisy famotorana, fantatra amin'ny anarana hoe Lava Jato, (operation Fanadiovana Fiara) namoaka ireo rohim-pifandraisana be dia be tamin'ny fikafika famotsiam-bola sy fanolikolena mpitondra fanjakana, ary azo heverina fa misy mifandray amin'ny raharaha Odrebrecht ny ampahany amin'izany. Navoaka taorian'ny famoahana ireo antontan-taratasy izay nampiseho ny nandoavan'ny Odebrecht vola tamin'ireo orinasa roa manana fifandraisana amin'i Filoha Kuczynski ny hetsika hanonganana azy.
Tamin'ny 17 Desambra, tao anatin'ny lahateny fohy nataony, nanambara ny filoha Kuczynski fa famelezana ny rafitra najoron'ny lalampanorenana ny hetsika fanesorana, miantso izany ho “fikasana hanaisotra haingana“
Telo andro taty aoriana, ny alin'ny fivoriana niadian-kevitra amin'ny fanakanana ny filoha tao amin'ny parlemanta, dia nitodika tany amin’ ny vahoaka Peroviana indray ny filoha. Tanatin'ity lahateny faharoa ity, dia niaraka tamin'ireo filoha lefitra roa Martín Vizcarra sy Mercedes Aráoz ny filoha Kuczyinski, nanambara fa “tsy misy filoha lefitra hiaraka amin'ny governemanata nateraky ny hetsika tsy rariny sy tsy demokratika”
Tamin'ny 22 Desambra, nandà tamin'ny isa tery dia tery ny hanakanana ny Filoha Kuczynski ny fivoriana itambarambe tao amin'ny kongresy.
Teo anivon'ity toe-javatra mampiadihevitra ity dia namelona fanairana tao amin'ny media sosialy i Alberto Borea, mpisolovava an'i Kuczynski, tamin'ny antso handavana ny fanambaràna [fanakanana]. Nandritra ny ora roa i Borea nanonona ireo mpisaina maro nalaza teo amin'ny tantara, toa an'i Montesquieu, Aristote ary Raymond Aron. Na izany aza, ny tena nisongadina indrindra dia ny fanononana ilay fanorolahy iray malaza amin'ny tantara an-tsary antsoina hoe Condorito. Midika ara-bakiteny hoe “voromahery kely” kely, malaza amin'ny fiafaran'ny tantara izay miavaka ao amin'ny tantara an-tsary i Condorito ahitana azy mianjera aoriana ao anatin'ny fisafotofotoana sy fahatalanjonana ary misy soratra mivaky hoe “plop!” eo amboniny.
Izay rehetra voalazan'ilay tanora mpikambana ao amin'ny kaongresy dia tsy dia ilaina lavina intsony (…). Nolazainy fa ao amin'ity vondrona ity (Herim-Bahoaka), tsy ara-dalàna ny fanangonana vola amin'ny kolikoly. “Plop”, tahaka ny ao amin'ny Condorito “.
Ny “tanoran'ny kongresy” nolazaina dia i Daniel Salaverry, mpikambana ao amin'ny Herim-Bahoaka, vondron'ny mpanohitra lehibe nahazo ny maro an'isa lavitra dia lavitra tamin'ny fifidianana ankapobeny tamin'ny taona 2016. Na dia vondrona hafa aza no nangataka ny fanakanana, dia nitabataba tamin'ny fanakanana ny filoham-pirenena ny Herim-Bahoaka. Ny tian'i Alberto Borea ampidirina an-tsaina eto dia hoe manangom-bola amin'ny kolikoly ny Herim-Bahoaka.
Nahasarika ny fifantohana tao amin'ny media sosialy ny fanehoan-kevitr'i Borea saingy nanjary lohahevitra mafana nironana ny fandresen-dahatra nampiasain'ilay vehivavy mpikamban'ny kongresy solombavambahoaka Yeni Vilcatoma izay mirona mankany amin'ny fanalana ny filoha.
Notondroin'i Vicatoma i Gerardo Sepúlveda, mpandraharaha shiliana mpiara-miombon'antoka ara-barotra amin'i Kuczynski izay niandraikitra ny raharaham-pitantanany ara-pihariana raha mbola minisitra nandritra ny fitondran'i Alejandro Toledo (2001-2006) i Kuczynski. Nanasongadina imbetsaka ny fiaviana shiliana an'i Sepúlveda i Vilcatoma ary mbola nosoritany ihany koa fa raha ny tena marina dia shiliana i Condorito izay notononin'i Borea:
Inona no nataon'ny filoha? Manala baraka amin'ny maha firenena antsika eo anoloan'ny Shiliana (Gerardo Sepúlveda) iray. Devoly mahantra mipetraka eo an-databatry ny filoha ary manatrika mijery antsika rehetra (…) Lehilahy shiliana namitaka antsika rehetra. Zavatra iray ihany no nataon'i [Alberto Borea] mpisolo vava an'i [Kuczynski's] dia ny nanonona an'i Condorito, ary fantatrao ve, tompokolahy sy tompokovavy, fa Shiliana i Condorito, Shiliana izy! aiza ny fitiavan-tanindrazana?
Nipoapoaka avy hatrany ny tambajotra sosialy, ary nanjary lohahevitra nalaza tao amin'ny Twitter i Condorito:
Nandao an'i Però i Condorito rehefa avy nihaino an'i Vilcatoma!
Aza mandeha, tianay ianao
Voatra amboaram-peon'i Yeni Vilcatoma amin'ny hoe “Shiliana i Condorito”
Amin'ireo olona rehetra manantantara notsongain'i Borea (Aron, Montesquieu, Burke), nanatsonga an'i Condorito i Vilcatoma!! Mangataka fanazavana aho!!! [Fanamarihan'ny mpanoratra: avy amin'ny teny espaniola “exijo una explicación”, fehezanteny fampiasan'i Condorito].
Ny ampitson'io, niala tsiny noho ny fanambaràny sasany (fa tsy ny rehetra) ny solombavambahoaka Vilcatoma:
🔴 Niala tsiny tamin'ny vahoaka shiliana i Yeni Vilcantoma taorian'ny fizarana nampiady hevitra momba an'i Condorito🐦
🎙️ “Miala tsiny aho ary sintoniko ny teniko izay mety hisy fiantraikany amin'ny vahoaka shiliana, manaja azy ireo aho”.
Famindra-po an'i Fujimori, toko vaovao amin'ny krizy
Tsara homarihina fa ny Filoha teo aloha Alberto Fujimori, izay nogadraina noho ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona nandritra ny fotoana niasany, dia nomen'ny Filoha Kuczynski famindram-po tamin'ny 24 Desambra 2017.
Nifaninana ho filoham-pirenena i Keiko Fujimori, zanaka vavimatoan'ny filoha teo aloha Alberto Fujimori, ary resin'ny filoha Kuczynski tamin'ny isanjato 0,24 monja. Na izany aza, nahazo toerana 72 amin'ny 130 tao amin'ny parlemanta ny antokony.
Tsy nandrotsa-bato tamin'ny fanesorana ny filoha i Kenji Fujimori zanaka lahin'i Alberto sady mpikambana ao amin'ny kongresy amperinasa tamin'ny 22 Desambra, roa andro talohan'ny nanoloran'i Kuczynski ny famindram-po an'i Alberto Fujimori. Nisintaka tsy nandrotsa-bato ihany koa ireo mpikambana sivy hafa avy ao amin'ny vondron'i Fujimori izay nampitanila ny mizana ho any amin'i Kuczynski. Nitarika sahoan-dresaka ny fotoana nisian'ireo toe-javatra ireo hoe tsy nandrotsa-bato ho takalon'ny amin'ny famindram-po ho an'ny rainy i Kenji Fujimori.
Nitranga taty Però ny House of Cards tena izy: Nanomboka dingana hanesorana an'i PPK amin'ny toerany ny zanakavavin'i Fujimori ary nifampiraharaha tsy handrotsa-bato mba tsy hahombiazan'ny fanalana ny filoha ny anadahiny, nanao famindram-po i PPK ho takalon'ny tsy fandrotsaham-bato, nahazo famindram-po ihany i Fujimori. Tsy mampino
Ho an'ny olona maro, izany tokon-tantara iray manontolo izany dia fanoharana fotsiny amin'ny fifampiraharahana misy eo amin'ny kilasy politika mikatom-baravarana. Niafara tamin'ny fihetsiketseham-panoherana sy fifanandrinana teo amin'ny vondrona pro sy anti-impeachment ny famindram-po azon'i Fujimori ary fanombohan'ny dingana vaovao amin'ny krizy ara-politika peroviana:
Amin'ny alalan'io famindram-po io no ilazanao anay rehetra fa tsy misy olona tokony handoa ny fanarenana ara-sivily, sa tsy izany? Namindra fo an'i Fujimori tsy nampadoa azy na dia ariary amin'ny trosany aza ianao.
Nanamafy i Carlos Rivera, mpahay lalàna ao amin'ny Ivontoeran'ny Fiarovana ara-Pitsarana, fa handeha ho any amin'ny Fitsarana Iraisan'ny Amerikana amin'ny Fampanajàna ny Zon'olombelona ny fianakavian'ireo niharan'ny heloka bevava niampanga ny filoha teo aloha Fujimori, mba hanafoanana ny famindram-po izay mahatonga azy [Fujimori] tsy hamarana ny 25 taona igadràny.
Però: Niteraka hetsi-panoherana noho ny “fifanarahana maharikoriko” ny famindram-po krismasy azon'i Fujimori